Xog: Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey CC Shakuur? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xog: Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey CC...
Xog ay heshay Badweyn Online ayaa sheegeysa in raali-gelinta uu Kheyre bixiyey ay ku timid cadaadis xooggan oo uga yimid Madasha Xisbiyada Qaran, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyo sidoo kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Sida ay xogta ku heshay Badweyn Online, xubnaha ka wakiilka ahaa Kheyre ayaa kadib u tegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaasi oo aqbalay codsigooda islamarkaana u sheegay inuu Xasan Sheekh xallin doono, balse ay u baahan yihiin inay soo xaliyaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sheekh Shariif ayaa kadib la hadlay Xasan Sheekh, una sheegay in Kheyre uu kaga dhigay, taasi oo Xasan uu aqbalay.
Previous articleMaxoow CC Shakuur kayiri raali-gelintii uu siiyey Xasan Kheyre, dalab cusub-na diray
Next articleWararkii ugu dambeeyey shirweynaha u furmaya hoggaamiyeyaasha mucaaradka
Dhageyso :Axmed Madoobe oo Ciidamadda Dowladda Amar Dul Dhigay
XOG: Dagaal Cusub Oo Ka Dhex Qarxay Farmaajo Iyo Muuse Suudi & Kulan Xalay Ku Dhexmaray Villa Somalia
65 Sano jir siweyn oga farxiyay caalamul islaam iyo dowlada Norway iyo hadal heyntiisa oo taagan